Tahan’ny fahantrana: anatiny ny fahasalamana sy ny fanabeazana | NewsMada
Natao, ny 27 sy ny 28 oktobra teo, ny atrikasa nitadiavana ireo singa hamaritana ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara (IPM)*. Atrikasa notohanan’ny Fandaharasan’ny Firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud), nandraisan’ny sokajin’olona maro anjara. Maro ireo singa nofaritana amin’izany eto amin’ny firenena, ankoatra ny fahantrana amin’ny vola. Ampidirina anisan’ny IPM, ohatra, ny momba ny raharaham-panjakana, naroson’ny tale jeneralin’ny toekarena ao amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, Ramiandrisoa Olivier. “Hatramin’izay, noferana ho 1,90 dolara ny fidiram-bola isan’andro farany ambany, isan’olona. Misy olona mahita io vola io, saingy tsy afa-po any amin’ny raharaham-panjakana”.
Araka izany, azo amaritana ny tahan’ny fahantrana ireo asam-panjakana ireo, azo ampidirina koa ny tsy fandriampahalemana, zava-misy iainan’ny maro. Koa am-pandinihana izany singa izay ho azo amaritana azy, izay voalohany ny hamoahana izany eto Madagasikara, fa efa namoaka singa iombonana eo amin’izao tontolo izao ny Pnud. Ho an’ny Pnud, tena fahantrana ny mahakasika ny fahasalamana, ny fanabeazana, sy ny fari-piainana.
Mahakasika firenena 101 ny tatitra farany navoakan’ny Pnud. Hita tamin’izany fa miisa 1,3 miliara ny olona miaina ao anaty fahantrana. 2/3 amin’ireo, any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, 84 % ny aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Anisan’ireo 101 ireo i Madagasikara. Ny taona 2012 sy ny 2013 ny nanaovana fanadihadiana farany teto an-toerana. Ity taona 2020 ity no saika nanaovana fanadihadiana manaraka isan-tokantrano eto an-toerana, iarahana amin’ny Banky iraisam-pirenena, saingy tsy tanteraka noho ny Covid-19.